Basel iyo Zurich
Safarada Magaalada iyo Bandhiga Baska Basel
Gaadiidka garoonka, Basel, garoonka Shuttle, adeegga limousine, biririf magaalada
Ma aha oo kaliya macaamiisheena ganacsiga - laakiin sidoo kale qoysaska iyo kooxaha ilaa dadka 7 - waxaanu bixinaa suurtogalnimada safar raaxo leh mid ka mid ah limewiinada nooca caadiga ah. Gaar ahaan bilaha xagaaga, Basel waxay soo jiidataa dalxiisayaal badan oo doonaya inay soo ogaadaan magaalooyinka ku hareereysan Switzerland, Faransiiska iyo Jarmalka. Sababtoo ah meelaheena aadka u fiican waxaan ka dhigi karnaa safarka magaaladaada sida ugu macquulsan. Qaar badan oo ka mid ah macaamiisheena ganacsiga waxay ku raaxaystaan ​​fursad ay ku daraan ganacsiyada khaaska ah iyo in ay hogaamiyaan khibradaheena khibradda leh ee ka baxsan culeyska ganacsiga iyo khilaafka dadweynaha
akhri wax badan
BASELWORLD 2018 - Safar raaxo leh Basel Adeeg Basel
Gaadiidka garoonka, Basel, Baselworld, Adeegga wareejinta
Sannad kasta guga, Basel wuxuu hoy u yahay hal usbuuc in ka badan shirkadaha 1,800 oo soo bandhigaya saacadahooda iyo dahabiga on Baselword. Abaabulayaasha carwadan ee muhiimka ah ayaa ka cabanin muhiimada martida. In ka badan tafaariiqda 100,000 iyo wakiillo ka socda jumladaha ayaa laga filayaa inay ka soo qayb galaan Ciyaaraha Caalamiga ah ee Ilaalinta iyo Dharka Xoolaha. Bishii Maarso 22, 2018 albaabbada caddaaladda ayaa u furan martida. Iibiyaha shakhsi ahaaneed ee BASELWORD - Adeegga Bedelka Basel Our EuroAirport Basel waa daqiiqado yar oo kaliya oo ka baxsan goobaha bandhigga. Laakiin dhab ahaantii - sida kuwo kale oo badan
Basel, garoonka Shuttle, adeegga limousine
BASELWORLD 2018 - Waxay ku haboontahay inay la socoto Adeega Bedel Basel
Gaadiidka garoonka, Baselworld, Wareejinta madaarka, Bedelka Ganacsiga Ganacsiga, Adeegga wareejinta
Basel kasta oo ah Basel waxay marti u tahay shirkadaha 1800 oo soo bandhigay waxashadooda iyo waxyaabaha dahabiga ah ee Baselword. Uma baahnid inaad ka cabatid tirada dadka soo booqda ee ku wajahan canshuurta ganacsi ee muhiimka ah, sababtoo ah sannadkii kasta, 2017 waxaa la filayaa in ay matalaan tafaariiqda 100.000 iyo wakiillada jumlada ee World Watch iyo Munaasabadaha Dhuxusha. 22 March March 2018 albaabbada carwadu waxay u furan tahay socodka booqdayaasha. Baaskiil ku habboon BASELWORD - Adeegga Bedelka Basel Our EuroAirport Basel waa daqiiqado yar oo kaliya by baabuurka ka soo bandhigay. Laakiin dhab ahaantii aad rabto - sida safar badan oo kale oo ganacsi - bandhigga soo saaraha
Waxaan kuu soo bandhigi karnaa adeeg gaar ah sida martida martida ah ee magaaladeena quruxda badan ee Basel. Iyada oo adeegga guud oo dhan ah inta lagu jiro joogitaankaada Basel, waxaanu hubinaynaa in aad diiradda saari karto waxyaabaha muhiimka ah - haddii aad ku aragto Basel ee Old Town, booqasho Kunstmuseum ama shirarka ganacsiga. Adeegga wareejinta tooska ah ee Garoonka Garoonka ama Guryaha Waxaan kuu daryeeli doonnaa markaad Basel tagto garoonka garoonka ama tareenka. Waxaan kuu sugeynaa markii aan joogno terminal-ka oo kaa nadiifinno safarkaaga adigoo kaaga caawinaya boorsooyinkaaga nooca limousine. Laga soo bilaabo halkaas ayaan la soconaa
Basel, garoonka Shuttle, adeegga limousine, Zuerich
Ku soo dhowow si badbaado leh oo marmar leh - adeegaaga lacag-bixinta ee Premium Ma waxaad qorsheyneysaa inaad ku socoto ganacsi ama raaxaysi, miyaad rabtaa inaad hubiso safar siyaada ah oo leh gaadiidka qumman ee la isku halayn karo ka hor intaadan safrin? Saaxiibkayagu wuxuu kaa qaadi doonaa mid ka mid ah tayadeena tayada sare leh, oo nadiif ah oo Jarmal ah oo guriga ku yaal, laga soo bilaabo xafiiska ama garoonka albaabka. Dabcan waxaan kaa caawin doonaa boorsada. Dabcan, waa in diyaaradaadu soo daahdaa, ma joojineyno, laakiin sug in aad timaado. Kusoo dhawow oo raaxo u lahow meesha aad ku socoto Badankooda rakaabkeena waxay u isticmaalaan u wareejinta garoonka diyaaradaha ee Zurich Airport iyo Euro